Mari-nehupfumi, 05 Chikunguru 2019
Zviri Kutepfenyurwa Izvozvi Livetalk
Chishanu 5 Chikunguru 2019
Chikunguru 05, 2019
Hurumende Yoburitsa Bhiri reKuvandudza Chimwe Chikamu cheAIPPA
Hurumende yaburitsa mugwaro rayo re government gazette bhiri reMedia Information Bill rekuvandudza chimwe chikamu chemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act.
Kanzuru yeBulawayo Yopesana naVaChasi Mumusangano Waitirwa muBulawayo
Meya weguta reBulawayo, VaSolomon Mguni, pamwe nevamwe vagari vemuBulawayo, vabuda mumusangano wange wadeedzwa negurukota rezvemhando dzemoto, VaFortune Chasi, senzira yekuratidza kusafara kwavo pamusoro pehurongwa hwekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi emarasha muBulawayo.
Chikunguru 04, 2019
Zimbabwe Yonanga kuMakwikwi e2019 Netball World Cup
Mutauriri wechikwata ichi, VaMaimba Mapuranga, vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya, ayo vanga vachigazdirira zvakasimba.
Varimi Votanga Kupihwa Dhiziri nePeturu Pamberi peVeruzhinji
Gurukota rezvemhando dzemoto, VaFortune Chasi, vanoti varimi ndivo vachange vave kutanga kuwaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti varimi vane mbesa dzemumwaka wechando vasarasikirwe nenguva.
MDC Yoshora Kudomwa kwaVaSilaigwana Kuti Vave Mukuru weSarudzo muZEC
Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change riri kuchema chema nekudomwa kwaVaUtoile Silaigwana semukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Chikunguru 03, 2019
Kushaikwa kwePeturu neDhiziri Kwotemesa Vakawanda Musoro
Vanhu vakawanda vari kuswera vari mumitsetse nemotokari dzavo vakamirira kuwana peturu mumagaraji akawanda.
Hurumende Yoronga Kuwedzera maWar Veterans Mari dzeMudyandigere
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko, Ambassador Mark Grey Marongwe, vazivisa komiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika kuti hurongwa uhwu huri mubhiri rekushandura mutemo weWar Veterans Act iro riri kunyorwa nebazi ravo.
Hurumende Yozeya neVashandi Nyaya dzeMihoro neMusi weChipiri
Kanzuru inounza pamwe chete hurumende nevashandi vayo kuti vazeye nyaya dzemihoro nemashandiro avo yeNational Joint Negotiating Council wave kusangana nemusi weChipiri svondo rinouya kuzeya nyaya dzemihoro.
Mutungamiri weDunhu reGauteng Okurudzira Kusimbiswa kweMiganho yeNyika
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvagara zvichiratidzira zvichinyunyuta nekurwiswa kwazvinoitwa nevemunyika iyi zvichinzi zviri kuvatorera mabasa
Chikunguru 02, 2019
Vakawanda Vokurudzira ZACC Kuti Iferefete Huori Hwakaburitswa naAmai Chiri
Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paMidlands State Univeristy, VaVincent Chakunda, vachitaura semuongorori akazvimirira, vati huwori hunodzorera budiriro yenyika zvakanyanya vakatsinhirawo kuti ZACC inofanirwa kuita ongororo pamusoro pezvakabuda mugwaro raAuditor General.
VaChamisa Vanoudzwa Kutambura Kuri Kuita Veruzhinji
Mutungamiri weMovement for Democratic Change, VaNelson Chamisa, vanzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare.
Hupfumi Hworamba Huchitatarika Asi Hurumende Ichiti Iri Kugadzirisa Zvinhu
Kunyange hazvo dhora rekuAmerica rakamboti dererei huremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS, zvinhu zvichiri kuramba zvichidhura zvakanyanya.
Komiti Inoona Nyaya dzeMhando dzeMoto Inotadza Kuita Basa Rayo
WFP Inoti Iri Kutadza Kuwana Mari kuMabhanga Yekubatsira Vanoshaya
Hurumende Inodzikisa Mutengo weHupfu
Amai Bona Mugabe Chikore Ndivo Vachagova Nhaka Yakasiyiwa naVaMugabe
Nyanzvi Dzozeya Nyaya Yekuti Bumbiro reMitemo Rovandudzwa Kuti VaMnangagwa Varambe Vachitonga